प्रकाशित मिति: Feb 23, 2019 1:17 PM | ११ फागुन २०७५
अब बाणिज्य बैंकहरुले कल डिपोजिट कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै सीमा तोकेको छ।
यो पनि पढ्नुस्: अर्कैले केरमेट गरेको नोट समाउँदा पनि जेल जानु पर्ने!
सीमा तोक्ने समाचारले बैंकिङ्ग उद्योगलाई तरङ्गित बनाएको छ। महत्वाकांक्षी जस्तो लाग्ने नीतिले दिन खोजेको संकेत के हो? यस्ले कस्तो साइड इफेक्ट पार्न सक्छ? यीनै प्रश्नहरुलाई केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ।
ताजा तथ्यांकले के भन्छ?
२०७५ साल पुस मसान्तसम्ममा “क”, “ख” र “ग” बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ३० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको अंश ३५४ अर्ब रुपैयाँ छ।
यो पनि पढ्नुस्: बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशन कसरी पालना गर्ने
यसरी हेर्दा बैकिङ उद्योगमा रहेको कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको योगदान अहिले ११.५५ प्रतिशत देखिन्छ। त्यस्तैगरी, बाणिज्य बैंकहरुको मात्र कुल निक्षेप २६ खर्ब ५६ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा कल डिपोजिटको हिस्सा २८४ अर्व रुपैंयाँ (१०.६९ प्रतिशत) छ।
यो पनि पढ्नुस्: बैंक डुबेपछि जन्मियो वासेल–१ र २, वित्तीय संकटले ३ आयो
बिकास बैंकहरुको कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको अंश १९ प्रतिशत देखिन्छ। त्यस्तैगरी, फाइनान्स कम्पनीहरुमा कल डिपोजिट करिव ६ प्रतिशत छ।
२०७५ साल पुस महिनामा बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको कुल निक्षेप र कल डिपोजिटको अंशः
बैंक (रुपैयाँ १० लाखमा)
कल डिपोजिट %
किन हुनु पर्छ कल डिपोजिटको अंश थोरै?
प्राकृतिक व्यक्ति र मुनाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका संघ संस्थाले व्याज आउने बचत खाता खोल्न पाउँछन्। तर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका फर्म, कम्पनी, संस्थान आदिले बचत खाता खोल्न पाउँदैनन्।
त्यसकारण, यस्ता कानुनी व्यक्ति र प्रबन्धले चल्ती खाता खोली कारोवार गर्दछन्। र, व्याज आम्दानीका लागि कल डिपोजिट खाता खोल्दछन्।
कल खाताको चेक बुक जारी गरिँदैन। तथापि, यस खातामा राखिएको निक्षेप माग गर्ने वित्तिकै बैंकले भुक्तानी दिनु पर्दछ। त्यसैले यसको नाम नै कल डिपोजिट भनेर राखिएको हो। आफुलाई चाहिएको बेलामा निक्षेप बाहिर जान सक्छ। नचाहिएको बेलामा थुप्रिन सक्दछ। निक्षेप आएपछि व्याज दिनै पर्यो। व्याज खर्च बढि हाल्छ। तर, कल निक्षेप बढ्दैमा दीर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय लिन पनि सकिदैन। त्यसैले, कल डिपोजिटलाई अस्थिर किसिमको निक्षेप मानिन्छ।
जब जब तरलताको चाप पर्दछ बैंकहरुले अलिकति बढि व्याज दिँदै निक्षेप तान्ने कोशिस गर्दछन्। बिहान आफुसँग रहेको निक्षेप साँझ अर्कैकोमा पुगिसकेको हुन सक्दछ। त्यसैले आज तरलता राम्रो अवस्थामा छ भनेर ढुक्क रहेको बैंक केहि दिनमा नै छट्पटिनु पर्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्दछ।
त्यसैले, यस प्रकृतिको निक्षेपबाट बैकिङ्ग उद्योगमा सृजना हुने अस्थिरता घटाउन नियमनकारी निकायले कल डिपोजिटलाई घटाउने नीति लिएको हो।
कल डिपोजिटको बिगतले के भन्छ?
अहिले नै बाणिज्य बैंकहरुमा कल निक्षेप करिव ११ प्रतिशत छ। तर, यो त समग्रमा हो। केही बैंकको त २० प्रतिशतभन्दा माथि पनि छ। त्यसोभए १० प्रतिशतभन्दा तल कसरी ल्याउन सकिएला त? सहजै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसका लागि करिव ५ बर्ष अगाडि २०७० साल कात्तिक मसान्तको तथ्यांक केलाउनु यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ।
त्यति बेला बैकिङ उद्योगमा निक्षेप जम्मा १३ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ थियो। र, कल डिपोजिट २२८ अर्व रुपैंया (१७.२७ प्रतिशत) थियो। कल डिपोजिट बिकास बैकहरुमा करिव १७ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनिहरुमा करिव १९ प्रतिशत थियो।
बाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको कुल निक्षेप ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैँयामा कल निक्षेपको अंश २२८ अर्ब रुपैयाँ (१८.३० प्रतिशत) थियो। करिव ५ बर्षको अबधिमा बाणिज्य बैंकहरुमा कल डिपोजिट १८.३० प्रतिशतबाट १०.६९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।
फाइनान्स कम्पनीहरुको करिव १९ प्रतिशतबाट घटेर करिव ६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। बिकास बैंकहरुको भने केहि बढेर करिव १७ प्रतिशतबाट करिव १९ प्रतशितमा उक्लिएको छ। त्यतिबेला संचालनमा रहेका ३१ बाणिज्य बैंकमध्ये २५ वटा बैंकको कल डिपोजिट १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। अहिले संचालनामा रहेका २८ बैंकमध्ये १४ बैंकको मात्र १० प्रतिशतभन्दा माथि बढि कल डिपोजिट रहेको छ।
२०७० साल कात्र्तिक महिनामा बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको कुल निक्षेप र कल डिपोजिटको अंशः
11 Banks having more than 25% call deposits
14 Banks having call deposits below 25% and above 10%
6 Banks having call deposits below 10%
कल डिपोजिट १० प्रतिशत भन्दा तल आउला?
समग्रमा बाणिज्य बैंकहरुले कल निक्षेप घटाउँदै गएको देखिन्छ । कल निक्षेप त्यसै पनि घटेर १०.६९ प्रतिशतमा आइसकेको छ। कल डिपोजिटको अंश त्यसै पनि घट्दै गएको छ। नियमनकारी निकायले सीमा भन्दा तल ल्याउन समय अवस्य दिइहाल्छ निर्देशन आएपछि बाणिज्य बैंकहरुले कल डिपोजिटलाई घटाउँदै लैजान्छन्। नियमनकारी निकाले निर्देशन दिएपछि त्यसको अनुपालना बैंकहरुले गरिहाल्छन् नै।
कस्तो हुन सक्छ साइड इफेक्ट?
सामान्यतया अस्थिर निक्षेपको अंश कम भएपछि यसले जोखिम व्यवस्थापनमा योगदान त दिइहाल्नु पर्ने हो। तर, यस्तो निक्षेपको अंश कसरी कम गराइन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।
चुक्ता पूँजी २ अर्व ५० करोड भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले बिकास बैंकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि परिवर्तन गरेका छन्। त्यसैले, संस्थागत कल डिपोजिट केहि बाणिज्य बैंकहरुबाट राष्ट्रियस्तरका बिकास बैंकहरुतिर सोझिन सक्दछ। तर, यस्ले साइड इफेक्ट ल्याउन सक्दछ।
बिकास बैंकहरु साना साना व्यक्तिगत निक्षेपमा बढि निर्भर छन्। त्यसैले, तरलताको अभाव भएको बेलामा पनि बिकास बैंकहरुलाई त्यति असर परेको सुनिएको छैन। तर, १९ प्रतिशत कल निक्षेप हुनुले यी बैंकहरुले पनि संस्थाहरुको कल निक्षेप राम्रैसँग लिन थालिसकेको संकेत देखिन्छ।
बाणिज्य बैंकमा भएको कल डिपोजिट बिकास बैंकतिर जान थाल्यो भने भविष्यमा बिकास बैंकहरुलाई तरलता चापको समयमा छट्पटाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ।
अर्को मुख्य कुरा कल डिपोजिटलाई १ महिना वा ३ महिनाको मुद्दतिमा परिवर्तन गर्ने रणनीति बैंकले लिन पनि सक्दछन्। यसो गर्दा कल डिपोजिटको अंश त कम देखिएला। तर, तरलता व्ववस्थापन आशातित सफलता दिन सक्दैन।
कल निक्षेप साँच्चै घटेको हो?
तथ्यांकले कल निक्षेपको अंश घटेको देखिन्छ नै। तर, कसरी घट्यो यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ। २०६६ सालबाट नै तरलता व्यवस्थापनमा थोरै धेरै अप्ठ्यारा देखिँदै आएको छ। त्यसैले बैंकहरुले १ वर्षे मुद्दतिमा १२ प्रतिशतको वरिपरि व्याजदर प्रदान गर्दै आएका छन्। १ वर्षे मुद्दतिमा १२ प्रतिशतको वरिपरि व्याजदर पाएपछि केहि व्यक्तिगत बचतकर्ता र संस्थागत निक्षेपकर्ता पनि मुद्दति निक्षेपतर्फ आकर्षित भए।
२०७० सालमा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा मुद्दतिको अंश ३३ प्रतिशत थियो। त्यो बढेर अहिले ४७ प्रतिशत पुगेको छ। सिद्धान्तत: ४७ प्रतिशत मुद्दति निक्षेप हुनुले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता हुनुपर्ने इंगित गर्दछ। तर, कुल निक्षेपको झण्डै ५० प्रतिशत मुद्दति निक्षेप हुँदा पनि बैंकहरुलाई सहजता छैन। बर्षेनि कात्तिक लागेपछि निक्षेप व्यवस्थापनका लागि बैंकहरुको दौंडधूप सुरु भैहाल्छ।
किन गरेन मुद्दति निक्षेपले सहयोग?
करिव ५ वर्ष अगाडि बाणिज्य बैंकहरुसँग भएको कुल निक्षेपमा बचतको अंश करिव ४० प्रतिशत थियो। अहिले करिव ३२ प्रतिशतमा झरेको छ। मुद्दतिमा उच्च व्याजदर पाएकाले व्यक्तिगत बचतकर्ताहरु मुद्दति तर्फ आकर्षित भएका छन्।
वचत खातामा रहेको भए पनि व्यक्तिगत निक्षेप लगभग स्थीर नै रहन्थ्यो। त्यसैले, १ बर्षे मुद्दतिमा राख्दैमा यस्ले खासै तात्विक भिन्नता ल्याएन। बरु, १ बर्ष पुग्ने वित्तिकै उक्त निक्षेप अर्को बैंकमा जान नदिन दौड्धुप गर्नुपर्ने कार्य बढायो।
अर्कोतिर उच्च व्याजदर पाइने भएकाले संस्थागत निक्षेपकर्ता पनि १ बर्षे मुद्दतितर्फ आकर्षित भए। तर, निक्षेप ल्याउन पाएको छैन, भुक्तानी दिनुपर्ने दिन आइहाल्छ। त्यही निक्षेप आफुसँग राख्नका लागि प्रयास गर्दा गर्दै बैंकहरुबीच “प्राइस वार” हुन थाल्यो।
मुद्दति निक्षेप त बढाइयो। तर, लगभग सबै १ बर्षका लागि! त्यसैले, यस्ले खास स्थीरता ल्याउन सकेन। त्यसमाथि पनि केहि बर्षयता निक्षेपको परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग अत्याधिक बढेर गएको देखिन्छ। त्यसैले कर्जा लगानी योग्य स्रोत परिचालन गर्नका लागि बैंकहरुलाई संघर्ष गर्नु परिरहेको छ।
के राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान देला?
नेपाल राष्ट्र बैंकको कल डिपोजिटलाई १० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने नीतिले आशातित फल दिनका लागि संघर्ष गर्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। यो प्रयोग गर्नुपर्ने औंजार हो। तर, ठ्याक्कै निको पार्ने औजार भने नहुन सक्दछ।
बैंकहरुले २०/२५ बर्षसम्मका लागि दीर्घकालिन कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। तर, त्यसका लागि दीर्घकालिन स्रोत भनेको लगभग पूँजी कोष मात्रै हो। दीर्घकालिन मुद्दति निक्षेप कम भएकाले यसले खासै योगदान दिन सकेको छैन। र, यसका लागि बचत निक्षेपमा बढि भर पर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैले, ३ वर्षेदेखि ५ बर्षे निक्षेप बढाउने औंजारहरु प्रयोग गर्न सके यस्ले जोखिम व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्थ्यो। बैंकहरु व्याजदर घटिहाल्छ, महँगो व्याजमा लामो समयका लागि निक्षेप किन लिने भन्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ।
निक्षेपकर्ताहरु पनि १ बर्षका लागि राख्दा पनि र ५ बर्षका लागि राख्दा पनि लगभग उस्तै व्याजदर भए किन ५ बर्षलाई राख्ने भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छन्।
२०७४ साल माघ महिनाको मुद्दति निक्षेपको स्थिति
(रु. दश लाखमा)
भारित औषत ब्याज दर
अवधि अनुसार %
Total Fixed Deposit
९१ प्रतिशत मुद्दति निक्षेप २ बर्षभन्दा कम अबधिलाई राखिएको माथिको तथ्यांकले देखाउँछ। मुद्दति निक्षेपले दीर्घकालिन लगानीलाई पटक्कै सहयोग गरेको छैन। दीर्घकालिन निक्षेप राख्न व्याजदरले आकर्षित गरेको पनि छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालिन निक्षेप बढाउनका लागि लिनुपर्ने नीति यहाँनेर हो।
अहिले त्यसै पनि वास्तकिता नबुझी कर्जाको व्याज महँगो भयो भनेर सर्बत्र चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ। त्यस कारण पनि लामो अबधिका लागि महँगो व्याजदरमा निक्षेप स्वीकार गर्ने रणनीति बनाउन बैंकहरु हिच्किच्याएका छन्।
तर, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोणबाट एक निश्चत अंशसम्म महँगो व्याज तिरेर भए पनि दीर्घकालिन निक्षेप लिने रणनीति बनाउन बैंकहरु हिच्किच्याउन हुँदैन। यो बढि खर्च होइन। यो त “कष्ट अफ डुइङ्ग बिज्नेस्” हो। “कष्ट अफ म्यानेजिङ्ग रिस्कस्” हो।
त्यसैले, यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले १ बर्षभन्दा बढी अबधिका लागि रहने कुल मुद्दति निक्षेप बढाउन योगदान दिने नीति लागू गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। बैंकहरु पनि लामो अबधि रहने निक्षेपलाई आकर्षित गर्ने योजना र रणनीति बनाउन लाग्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ। यसले हरेक बर्ष मुद्दति नवीकरणका लागि गर्नुपर्ने संघर्षलाई केहि कम गर्दै लैजान सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, यस अभियानमा एक्लै लागेर हुँदैन। सबै बैंकहरु एकजुट हुँदा सहजता हुन्छ।
(घर्ति बैंकिङ विज्ञ हुन्।)